Bangiga Sink waxa uu kor u qaaday caasimaddiisa 7.7 bilyan oo birr Bangiga ayaa xaruntiisa ku dhisaya lacag dhan 740 milyan oo birr - ዜና ከምንጩ
Bangiga Sink waxa uu kor u qaaday caasimaddiisa 7.7 bilyan oo birr Bangiga ayaa xaruntiisa ku dhisaya lacag dhan 740 milyan oo birr
Bangiga hore ee Oromia Credit and Savings Institution Bank Sineke waxa uu kor u qaaday caasimaddiisa oo ahayd 2.8 bilyan oo birr 175 boqolkiiba ilaa 7.7 bilyan.
Bangiga Sinke oo bilo u soo koraya bangi, laga bilaabo 2019/2020 microfinance, waana lacagta ugu yar ee Baanka Qaranku u baahan yahay in lagu sameeyo bangiyo cusub, nus bilyan birr iyo bangiyada jira si kor loogu qaado lacagahooda.
raasamaalka ilaa shan bilya Sida ku cad go’aanka saamilayda hay’adda amaahda iyo kaydka, waxay gaadhay 4.4 bilyan oo birr.
Bangiga oo ka kooban 22 saamile, waxa uu muujiyay korodh dhan 11 boqolkiiba sannadkii hore, waxaanu gaadhay 16 bilyan oo birr.
Ku-simaha Guddoomiyaha Bangiga, Zewde Tefera, ayaa sheegtay in bangigu uu ka shaqeynayo sidii loo heli lahaa kaabayaasha aasaasiga ah ee bangiyada iyo kaabayaasha teknoolojiyadda, iyadoo intaa ku dartay in uu qorsheynayo mustaqbalka in uu ka shaqeeyo kheyraadka aadanaha.
Zewde waxaa u sheegay in bangigu uu kala shaqaynayo Bangiga Qaranka sidii loo heli lahaa in ka badan 400 oo laamood oo si buuxda u sharciya sanadka 2020/21.
Intii lagu guda jiray sanad xisaabeedka, bangigu wuxuu soo xareeyay in ka badan 2.3 bilyan oo birr, taasoo ka dhigan koror dhan 383 milyan oo birr sanad maaliyadeedkii ka horreeyay.
Dakhliga dulsaarka ayaa koray 14 boqolkiiba, isaga oo ka qayb qaatay in ka badan 1.94 bilyan oo birr.
Sidoo kale, dakhliga ka soo xarooda khidmadaha kala duwan ee adeegga ayaa kor u kacay 26.1 boqolkiiba ilaa 48.4 milyan oo birr, halka bangigu u diiwaan galiyay in ka badan 1.8 bilyan oo birr.
Taasi waxay keentay in mushaharka iyo gunnooyinka la siiyo shaqaalaha ay noqdeen 44% wadarta guud, iyadoo uu Bangiga soo galay 560 milyan oo birr.
Bangiga ayaa la sheegay in uu ku guda jiro ka shaqeynta bangiyada iyo lacagaha yar yar.
Waxaa muhiim ah in wax laga bedelo nidaamka bangiyada, waayo shirkadda Omni Core Banking waa waqtigeedii, isagoo sheegay in bangigu uu dhisay xarun xogeed oo ay ku baxayso lacag ka badan 50 milyan oo birr.
Waxa uu sheegay in bangigu ku kharash gareeyay in ka badan 300 oo milyan oo birr kaabayaasha teknoolajiyada.
Waxa uu sheegay in Bangiga uu soo xareeyay lacag dhigaal ah oo dhan 6.1 Bilyan oo Birr, isaga oo intaa ku daray in uu kordhay Hal Bilyan oo Birr marka loo eego isla muddadaas sannadkii hore.
Bangiga Sinke ayaa dhinaca kale bilaabay dhismaha dhisme ka kooban 1400 oo mitir oo laba jibaaran 1400 oo mitir oo laba jibbaaran, kaas oo loo dhisayo xaruntiisa iyo adeegyo kala duwan, waxaana ku baxay lacag dhan 740 milyan oo birr.
Dhismaha xarunta Bankiga ayaa waxaa fulinaysa qandaraasle lagu magacaabo Somket Engineering and Construction Private Limited.
Hay’adaha deymaha iyo kaydka ee qaybta dhaqaalaha yar yar ayaa u gudbiyay Bangiga Qaranka Itoobiya (NBE) si loo dalacsiiyo, oo ay ku jirto Hay’adda Kaydka Amxaarada iyo Kaydinta.
Hay’adda Kaydka iyo Kaydinta Amxaarada ayaa bishii March ee sannadkii hore ku kortay bangiga magaca Spring Bank, hantideeduna dhan tahay 9.2 bilyan oo birr, hantideeduna dhan tahay 36 bilyan oo birr. Spring Bank waxa uu leeyahay ilaa 9 milyan oo macaamiil ah, kuwaas oo 1.5 milyan ka mid ah ay yihiin macaamiil la amaahday.
Total views : 7538205